Archive du 20180421
Hetsika eny Analakely Hanao rodobe ny TIM sy ny MAPAR
Efa rakotra mpitandro filaminana an-jatony maro ny teny Analakely sy manakaiky ny lapan’ny tanàna nanomboka omaly tolakandro. Mazava ny tenin’ny Prefen’Antananarivo, ny Jeneraly Ravelonarivo Angelo Christian andro vitsy lasa izay, fa tsy maintsy hosakanana ny famoriam-bahoaka eny Analakely anio.
Minisitry ny fiarovana Nametra-pialana saingy tsy nekena ?
Andro vitsivitsy izao no nandrenesana fa nametra-pialana ny minisitry ny fiarovam-pirenena , ny jeneraly Xavier Béni Rasolofonirina, saingy toa hoe tsy neken’ny filoham-pirenena izany.Hatramin’ny talata 17 aprily lasa teo no noezahana nokarohana ny vaovao momba io resaka io, saingy tsy nisy nahafahana nanamarina na nandiso azy.
Mafy ny herim-panoherana Miantso vonjy ny fanjakana
Miantso vonjy sy mamono afo ny fanjakana HVM eo anatrehan’ny fahamafisan’ny herim-panoherana. Sesilany ny fanirahana mpikarama an’ady politika niteny tamin’ny haino aman-jery eo anoloan’ny famoriam-bahoaka hataon’ny solombavambahoaka eny anoloan’ny Lapan’ny tanàna Analakely anio.
Filoham-pirenena sy ny fianakaviany Lasa mangingina any Frantsa
Nandao mangingina an’i Madagasikara ny alakamisy hariva teo filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny fianakaviany.
Alain Mahavimbina Ho kandidà filoha ?
Maro ireo fanehoan-kevitra sy atrik`asa natao tetsy sy teroa mahakasika an`ny fiainam-pirenena toy izany ny K3F na Komitin’ny Fahamarinana Fandriampahalemana Fiadanana tany Fianarantsoa. Namaly ny antso nataon’ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara sy ny FFKM tamin’ny taona 2017 mahakasika ny fiainam-pirenena ireo kandidà efa nanao fanambarana ofisialy ny firotsahany hofidiana ho filoham-pirenena sy ireo izay ho mpifaninana ho amin`izany ny K3F.
Fitondrana HVM Mila mametra-pialana, hoy ny Seces
Tsy mahefa intsony hanatanteraka ny zo sy hasin’ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra ny fitondram-panjakana ankehitriny, raha ny fanambarana an-gazety nataon’ny SECES, sampan Antananarivo.
Vondron’ny fikambanan’olon-tsotra Tsy ekena intsony ny korontana eto amin’ny firenena
Hatahoran’ny vondrona mpomba ny fitondrana HVM hivadika korontana eto amin’ny firenena indray ny fikasan’ireo depiote 11 eto Iarivo hotronin’ireo namany avy any amin’ny Faritra hafa mivondrona ao amin’ny solombavambahoaka mpanohitra eny amin’ny Antenimieram-pirenena
Fanamparam-pahefana ao Andapa Mitaraina ny fokonolona
Manao fanaparam-pahefana “avo loatra” ny tompon’andraiki-panabeazana iray ao Andapa, raha ny fanambaran’ny solontenam-pokonolona tonga nitatitra ny vaovao teto an-drenivohitra omaly.
Adalana tsy voatsabo intsony
Miarahaba Jean a, nanakory aloha ny voyage nareo mianakavy ve, efa renay hoe tonga tsara aa..fa dia milamina kosa aloha ianareo e, tsy miasa saina, sy mitaintaina ..miresadresaka eo am-pisakafoanana eo ny fianakaviana dia manapa-kevitra tampoka hoe amboary ny valizy fa aleo isika mba maka rivotra kely.
Sekreteram-pokontany namaky trano Mbola nahavita nandrahona ihany
Nahatsikaiky no sady nampalahelo ny zava-nitranga tetsy amin’ny fokontanin’i Manjakaray 2C, raha ny fitantaran’ny lehilahy 1 lasibatry ny vakitrano teny an-toerana.
Basket All-Stars du Président Lavon’ny Malagasy tamin’ny moka fohy ny Rosiana
Lavon’ny All-Stars Gasy tamin’ny moka fohy 74-73 omaly tetsy amin’ny Lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina ny Csa Rosiana na dia efa nitarika an’isa hatrany amin’ny “1er quart temps 15-23 sy teo am-pialan-tsasatra 36-48 aza.
Max Randriantefy “Hajaiko hatramin’ny farany ny maha-Malagasy ahy”
Repoblika 4 izay no nandalo fa tsy mbola nisy toy izao. Hafa kely ity fitondrana indray mitoraka ity saingy tsy mba hafa kely amina zavatra nahafinaritra sy nitondra filaminana na fiadanana ho an’ireo vahoaka napetraka ho eo ambany fiahiny fa dia tompondaka tamin’ity karazan-java mahamenatra sy nampivarahontsana rehetra ity.
Taom-pianarana 2018-2019 Amin’ny 19 novambra no hiditra ny mpianatra
Nivoaka sahady ny tetiandrom-pampianarana vaovao amin’ny taom-pianarana 2018-2019 ho avy io. Ny 19 novambra 2018 no hiditra ny mpianatra rehetra manerana ny Nosy ary any amin’ny 30 aogositra 2019 vao hifarana ny taom-pianarana 2018-2019. Hizara dimy mazava tsara ny fotoam-pianarana mandritra izany.
Oniversiten’Ankatso Trano an’arivony manodidina azy no ahiana harodana
Miaina anaty tebiteby tanteraka ireo mponina an’arivony monina manodidina ny Oniversiten’Antsako amin’izao fotoana izao. Raha araka ny fanazavan’Atoa Andrianjato John solontenan’ireo mponina eny an-toerana mantsy dia kasain’ny oniversite alaina indray ireo tany ivelan’ny efa nofaritany raha efa nisy ny délimitation nataon’ireto farany tamin’ny taona 2013.
MAILO NY VAHINY
Nanao fampandrenesana ny terataniny ny ambasady frantsay sy Amerikanina omaly. Izany dia ny tsy handehanana amin’ny faritra maro eto an-drenivohitra manomboka omaly zoma amin’ny misasakalina, izany dia manoloana ny hetsika izay hitranga anio. Eny Soarano, Behoririka, Tsaralalana, Ambodifilao, Ambatomena, Andohan'Analakely ary Ambohijatovo no tena faritra mena raha araka ny voatoatin’ilay fampandrenesana.
Fidangan’ny vidin-jiro Niaiky ny minisitra fa tena nisy tokoa ny tsy nety
Niaiky tokoa mantsy Rasoloelison Lanto, ministry ny rano sy ny angovo ary ny akoran’afo omaly fa tena nisy tokoa ny tsy nety tamin’ny famaritana ny vidin-jiro nataon’izy ireo, indrindra fa ho an’ireo olona mampiasa ilay tarif 16 nefa mandany latsaky ny 130 Kwh ka tsy maintsy hanaovana vidin-jiro vaovao.
Toeram-panofanana momba ny vato sarobidy Misy saram-pianarana mety amin’ny rehetra
Misy ny sehatra sy toeram-panofanana momba ny fikirakirana ny vato sarobidy (IGM) fa vitsy ny Malagasy mianatra noho ny tsy fahafantarana marina ny momba ny saram-pianarana ao. Raha vao miresaka an’io toeram-pianarana io fotsiny dia mihemotra ny ankamaroan’ny Malagasy ary mihevitra foana fa lafo be ny saram-piofanana.